Juventus oo u soo bandhigtay kooxda PSG heshiis isdhaafsi ee aad u xoogan – Gool FM
(Turin) 25 Agoosto 2019. Agaasimaha ciyaaraha kooxda kubadda ee Juventus Fabio Paratici ayaa u soo jeediyay PSG inay sameeyaan heshiis isdhaafsi ee aad u xoogan, kahor 10 maalmood inta uusan xirmin suuqan xagaaga.
Wargeyska “Tuttosport” ee dalka talyaaniga ayaa xaqiijiyay maanta oo Axad ah in kooxda Juventus ay isku dayeyso qorshaha ay isugu dayeeyso inay ku sii xoojiso safkeeda, si ay ugu dagaalanto dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka tahay xili ciyaareedkan, gaar ahaan tartanka Champions League.
Sidaas darteed Fabio Paratici ayaa wuxuu u soo jeediyay kooxda Paris Saint-Germain inay wada galaan heshiis isdhaafsi ah, si ay kaga helaan xiddigaha Marco Verratti iyo Angel Di Maria ama Julian Draxler, isla markaana ay dhankooda ku wareejiyaan Miralem Pjanić iyo Emre Can.
Sida ay wararku sheegayaan Fabio Paratici ayaa la kulmay dhigiisa kooxda PSG Leonardo Araújo maalmihii dhawaa ee lasoo dhaafay, wuxuuna u soo bandhigay heshiiskan weyn ee is weydaarsiga ah.
Kooxda ka dhisan magaalada Turin ayaa isla markiiba soo bandhigtay xiddiga reer Germny ee Emre Can oo ay ku badalaneyso Angel Di Maria ama Julian Draxler, iyo sidoo kale Miralem Pjanić ay dooneyso inay ku badalato Marco Verratti, laakiin wax jawaab ah ma eysan ka helin kooxda Paris Saint-Germain ilaa iyo hadda ee ku aadan ogolaansho ama diidmo.